Home Lotaya FAဘ၀ကရုနျးထှကျနိုငျမယျ့ ရိုးရှငျးတဲ့နညျးလမျး ၄ ခု (ခဈြသူမရတဲ့အကွောငျးပွခကျြတှကေဘာလဲ)
ဒီဆောငျးပါးက အကွံပေးခကျြတှကေ ကွာရှညျပီးခိုငျခနျ့တဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကိုလိုခငျြတဲ့လူတှအေတှကျ မြှဝပေေးတာပါ။ အခြိနျအတိုငျးအတာ တဈခုအထိ တဈယောကျတညျးနခွေငျးက အကြိုးကြေးဇူးတှရှေိနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး နာ ကငျြမှုနဲ့အထီးကနျြမှုတှကေို ခံစားရနိုငျပါတယျ။
တဈခြိနျတညျးမှာပဲ လူအမြားစုက တဈသကျလုံး တဈယောကျတညျး နဖေို့ကို ဆုံးဖွတျခကျြမခရြဲကွပါဘူး။ အမြားစုက အခဈြနဲ့ဘ၀လကျတှဲဖျောကိုလိုခငျြကွပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီအရာတှကေို ရအောငျကွိုးစားတဲ့နရောမှာ မှားယှငျးတဲ့နညျးလမျးတှကေိုအသုံးပွုတတျကွပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့အားလုံးတူညီတဲ့လမျးကွောငျးနဲ့မြှျောလငျ့ခကျြတှနေဲ့ဘ၀ကိုရှငျသနျနကွေပမေယျ့ ရလာဒျတှကေတော့ တူညီကွမှာမဟုတျပါဘူး။ ကြှနျတျောတို့ကောငျးမှနျတဲ့အရာတှကေိုရဖို့ ဘာတှပွေငျဆငျဖို့လိုအပျကွမလဲ? Singleဖွဈခွငျးက ကြိနျစာတဈခုမဟုတျသလို RSတဈခုရှိခွငျးကလညျးကြိနျစာတဈခုမဟုတျပါဘူး။
သငျဘယျဘ၀အခွအေနတေဈခုရောကျနပေါစေ အဲ့ဒါကအရေးမကွီးပါဘူး။ အရေးကွီးတာက သငျ့ကိုယျရေးကိုယျတာကိ စ်စတှဖွေဈတဲ့ အလအေ့ထတှနေဲ့ရှေးခယျြမှုတှပေါပဲ။ ဒီအရာတှကေမှ သငျ့ကိုနာကငျြစမေယျ့လူတှကေိုဝေးဝေးရှောငျဖို့နဲ့ပြျောရှငျတဲ့ဘ၀ဖွဈဖို့ကူညီပေးနိုငျမှာပါ။
ဒီခတျေမှာဆို အှနျလိုငျးပျေါမှာခဈြသူရှာလို့ရတဲ့၊ ခြိနျးတှလေို့ရတဲ့Dating siteတှအေမြားကွီးရှိနပေါတယျ။ အဲ့ဒီအံသွစရာကောငျးတဲ့နညျးပညာတှကေနတေဈဆငျ့ ကောငျးမှနျတဲ့ ခဈြသူတဈယောကျကို သငျရှေးခယျြနိုငျပါတယျ။ မငျးကိုပိတျ ဆို့ထားတဲ့အရာတှေ၊ တားဆီးထားတဲ့အရာတှကေို ဖျောထုတျလို့လညျးရပါတယျ။
မငျးခုရညျးစားဘာလို့မရသလဲ စတဲ့ပွဿနာကို သငျနားလညျဖို့လိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မငျးမဖွဈခငျြတဲ့Singleဘ၀ကို ဘာကွောငျ့ရနလေဲဆိုတဲ့ အဓိကအကွောငျးရငျးတှဖေျောထုတျကွညျ့ဖို့လိုနပေါပွီ။ မငျးကိုယျတိုငျမသိပဲအခဈြကိုအ၀ေးပွေးအောငျလုပျနမေိတဲ့အရာတှကေဘာတှလေဲ? ဒီတော့ခဈြခွငျးမတ်ေတာရှာဖှရောမှာ အမြိုးသမီးတှမှေားယှငျးနတေဲ့အခကျြလေးတှကေို ကြှနျတျောတို့ဆှေးနှေးပေးခငျြပါတယျ။ ၀ငျရောကျဆှေးနှေးဖို့လညျးဖိတျချေါလိုကျပါတယျ..
ယောကျြားတဈယောကျကို ပွေးစခေငျြရငျ သူ့ကိုအရမျးလိုအပျနတောကိုပွလိုကျပါတဲ့။ ယောကျြားတဈယောကျကိုလိုခငျြတာက တခွားအရာတှကေိုလိုခငျြတာနဲ့မတူပါဘူး။ လိုအပျခကျြဆိုတာ သငျ့ကိုသငျမပွညျ့စုံဖူးလို့ခံစားနရေတဲ့စိတျခံစားမှု ဒါမှမဟုတျ လုံးဝလဈဟာနသေလိုဘ၀လို့ခံစားမှု စတဲ့ စိတျခံစားမှုအခွအေနတေဈခုပါပဲ။
ဒီလိုနှလုံးသားထဲက ကှကျလပျကို RSတဈခု ဒါမှမဟုတျ Officialခပြွလို့ရတဲ့လူတဈယောကျယောကျနဲ့ ဖွညျ့စှကျဖို့ကွိုးစားပါ။ မိနျးမအတျောမြားမြားက လိုခငျြတဲ့ ကတိက၀တျမြိုးတှေ၊ စံနှုနျးတှသေတျမှတျလရှေိ့ပီး ဒါတှကေို ယောကျြားတှကေ ပွငျးပွငျးထနျထနျ မကွိုကျတဲ့အခါ မိနျးမတှကေ အတျောစိတျရှုပျထှေးရပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ယောကျြားတှကေတော့ ကတိက၀တျတှေ မလိုအပျကွပါဘူး။ ယောကျြားတဈယောကျဟာ သူ့ဖွဈတညျမှုကိုအတိအကမြွငျပွီး တနျဖိုးထားတဲ့ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ဘ၀ထဲကို ပြျောရှငျစှာ ၀ငျလာပါလိမျ့မယျ။
အပွနျအလှနျအားဖွငျ့ ယျောကျြားတဈယောကျကို ကိုယျ့ကောငျးစားမှုအတှကျအခှငျ့အရေးတဈခုလို ရှုမွငျတဲ့ သို့မဟုတျ သူ့လဈဟာနမှေု၊ ကိုယျ့ လိုအပျခကျြအခြို့ကို ဖွညျ့ဆညျးပေးတဲ့လူအဖွဈ လိုခငျြတဲ့ မိနျးမမြိုးဆိုရငျတော့ ယောကျြားတှကေ ၀ေး ၀ေးကိုပွေးကွပါလိမျ့မယျ။ ဆိုတော့ ယောကျြားတှမေပွေးစခေငျြရငျ သူတို့ကိုအသုံးခဖြို့မကွိုးစားပါနဲ့။
နောကျတဈခုက ယောကျြားတဈယောကျဟာ သူ့ကိုထောကျပံပေးနိုငျတဲ့ မိနျးမတဈယောကျကိုရှေးခယျြခငျြကွတယျ။ သူ့ထကျသာတဲ့ယောကျြားတဈယောကျဆီကိုလှယျလှယျနဲ့ အခြိနျမရှေးရောကျသှားနိုငျမယျ့ အဖွညျ့စှကျခံ အမှုနျအမှားလေးတဈခုလို သူတို့ကမခံစားစခေငျြကွဘူး။
လိုအပျခကျြ ဆိုတာက မြားသောအားဖွငျ့ ကိုယျ့ကိုကိုယျတနျဖိုးထားမှုကငျးမဲ့ခွငျး နဲ့ယုံကွညျမှုကငျးမဲ့ခွငျးတို့ကွောငျ့ဖွဈလရှေိ့ကွပါတယျ။ သငျ့ကိုတိုငျ သို့မဟုတျ သငျ့ဘ၀အသကျတာမှာ တဈစုံတဈခုပြောကျဆုံးသှားသလို ခံစားနရေရငျ ဆကျ ဆံရေးတဈခုခုက ကုသမှုဖွဈလိမျ့မယျလို့ မှားယှငျးစှာယုံကွညျမိတတျကွတယျ။ သငျRSတဈခုမတညျဆောငျခငျ မပြျောရှငျခဲ့ဘူးဆိုရငျ သငျရသှားလညျး မပြျောရှငျပဲဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။
သငျ့ကိုသငျSingleတဈယောကျဖွဈနတော ၀မျးနညျးနမေယျ့အစား အလုပျတဈခုခုလုပျပီးမငျးကိုယျတိုငျနဲ့မငျးကိုယျမငျးပဲဆကျဆံရေးတဈခုတညျဆောကျလိုကျပါ။ မငျးအတှကျဘာတှကေ အကောငျးဆုံးဖွဈနိုငျလဲဆိုတာနဲ့ မငျးခံစားမှုအတှကျ အ ကောငျးဆုံးဖွဈလာမယျ့အရာတှကေို လုပျပါ။
စိတျခမျြးသာကိုယျကနျြးမာအောငျနဲ့လှအောငျနပေါ။ အိုကေ.မငျးကိုယျမငျးတတျနိုငျသလောကျအကောငျးဆုံးတညျဆောကျပီးပီ၊ ကွံခိုငျပြျောရှငျလာပီလို့ခံစားလာရရငျ ဘယျယောကျြားမှ မငျးဆီက ပွေးမထှကျသှားတော့ပါဘူး။
မြားသောအားဖွငျ့ အမြိုးသမီးအမြားစုက သူတို့အပူတပွငျးနဲ့လိုခငျြတဲ့အရာကိုရဖို့အတှကျ စောငျ့ဆိုငျးသညျးခံဖို့တော့ဆန်ဒရှိကွပါတယျ။ အဲ့ဒါကဘယျလိုလဲဆိုတော့ သူတို့စိတျကူးယဉျအိမျမကျမကျထားတဲ့လူတဈယောကျထကျလြော့နညျးတဲ့ယောကျြားတှကေိုမကွိုကျနှဈသကျသလို အရမျးဇီဇာကွောငျဂြေးမြားနတေတျကွပါတယျ။
အခဈြဟာအရာအားလုံးကိုအောငျနိုငျတယျလို့ ပွောတတျကွပမေယျ့ အခဈြတဈခုတညျးကသာ ကွံခိုငျကောငျးမှနျတဲ့RS တဈခုကိုဖွဈပျေါစတောမဟုတျပါဘူး။ အခွားအကွောငျးအခကျြအလကျတှရှေိပါသေးတယျ။
ကှဲကှာသှားတဲ့ခဈြသူတှေ တခြို့ကိစ်စတှကွေောငျ့ တခြိနျခြိနျမှာပွနျခဈြလာနိုငျကွပါတယျ။ မငျးရဲ့ပထမဆုံးခြိနျးတှမှေု့မှာ ပွငျးထနျညို့ငငျတဲ့ခံစားမှုကို မခံစားရရငျ ထိုသူကမငျးဘ၀အတှကျ အလငျးရောငျမဟုတျဘူးလို့ပွောပါလိမျ့မယျ။
နောကျထပျပွဿနာတဈခုက “အခဈြနဲ့အတညျတကနြဖေို့ထကျတဈယောကျတညျးနတောပဲကောငျးတယျ”ဆိုတဲ့အတှေးကိုလကျကိုငျထားတတျကွပါတယျ။ သူတို့ခမြှတျထားတဲ့ ကွီးကယျြတဲ့ စညျးမညျြးစညျးကမျးတှထေဲမှာ ပိတျမိနကွေပွီး သူတို့ရဲ့အိမျမကျထဲကကောငျလေးကိုပဲ စောငျ့နတေတျကွပါတယျ။
Singleအဖွဈတဈယောကျတညျးနလေလေေ “ကောငျးပီ ငါဒီတဈခုကိုရှာဖို့ ဒီလောကျကွာခဲ့ပွီ၊ဘာကိုမှ အလြော့ပေး လိုကျလြောခွငျးမရှိပဲငါလိုခငျြတာကိုအတိအကရြဖို့ ငါထိုကျတနျတယျ”ဆိုတဲ့အတှေးတှနေဲ့ ပိုဆိုးလလေဖွေဈပါလိမျ့မယျ။
လူတဈယောကျမှာသငျလိုအပျတဲ့အရညျအခငျြးမရှိတဲ့ အရညျအသှေး၃ခုကိုစာရငျးပွုစုပါ။ ဒီထဲမှာ သူပိုကျဆံဘယျလောကျရှိလဲဆိုတာနဲ့ဆံပငျဘယျလောကျပေါကျလဲဆိုတာ မပါပါစနေဲ့။ ပြျောရှငျတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုကျဆံနဲ့ ဆံပငျပုံစံတှကေမလုပျပေးနိုငျပါဘူး။
ကောငျးမှနျတဲ့ယောကျြားတဈယောကျကိုဆှဲဆောငျဖို့ဆိုရငျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာအသေးစိတျအခကျြအလကျတှကေိုအရမျးအ လေးမထားပါနဲ့။ သငျ့စိတျနဲ့လုံးလုံးဆနျ့ကငျြတဲ့ခြို့ယှငျးခကျြမရှိမခငျြးသူ့ကိုနောကျထပျအခှငျ့အရေးတဈခုပေးပါ။
မိနျးမတျောတျောမြားမြားက သငျ့တျောတဲ့အခှငျ့အရေးမပေးပဲ ယောကျြားတဈယောကျကိုစိတျထဲက အမွနျထုတျပဈဖို့ပဲလုပျနတေတျကွတယျ။ တဈခါတဈလေ ကိုယျသတျမှတျထားတဲ့စံနှုနျးတှကေ ကိုယျ့ ကိုယျပိုငျအမူအကငျြ့တှနေဲ့တောငျမကိုကျညီတတျပဲဖွဈတတျပါတယျ။
ဒီတော့ သငျလိုခငျြတဲ့ အဓိက အရညျအခငျြးတှမေရှိရငျတောငျ သငျနစေ့ဉျဘ၀ဖွတျသနျးမှုနဲ့ကိုကျညီသငျ့တျောမယျ့ အ ခကျြတှကေိုခရြေးပါ။ မငျးရဲ့စိတျကိုနညျးနညျးလေးဖှငျ့လိုကျတဲအခါ အရမျးအံသွသာယာဖှယျကောငျးတဲ့အရာတှနေဲ့ကွုံ တှလေ့ာရနိုငျပါတယျ။ ဒီတော့ပွောခငျြတာက အရမျးဇီဇာမကွောငျဖို့ပါပဲ။
သငျရညျးစားမရအောငျအကွီးမားဆုံးတားဆီးနတေဲ့အခကျြက သငျ့ကိုမလိုခငျြတဲ့ယောကျြားတှကေို သငျကအရမျးလိုခငျြတာပဲဖွဈပါတယျ။ ကိုယျ့ကိုကမျးလာတဲ့လကျတှေ၊ နှလုံးသားတှကေို မမွငျနိုငျပဲ ကိုယျ့နှလုံးသားလိုခငျြတာကိုပဲ ရူးသှပျနကွေတဲ့အမြိုးသမီးတှတေျောတျောမြားမြားရှိပါတယျ။
သငျ့အတှကျဘာမဆိုပေးဆပျရဲတဲ့ယောကျြားတဈယောကျဟာ သငျ့ရဲ့အတ်တကွောငျ့ အကွီးအကယျြပကျြစီးသှားစနေိုငျသ လို သငျ့အတှကျကွီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလညျးဖွဈစပေါလိမျ့မယျ။
မငျးကိုမလိုခငျြတဲ့ယောကျြားတဈယောကျကိုအတငျးလိုကျမတှယျကပျနပေါနဲ့။ ဒါသငျ့ကိုအခွားသော ကောငျးမှနျတဲ့အရာတှကေို မမွငျနိုငျအောငျ ကာဆီးထားပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကိုခဈြခငျ မွတျနိုးသူ၊ ဂရုစိုကျသူ၊ နားလညျနိုငျစှမျး ရှိသူတှေ သငျ့ဘေးမှာ ရှိနခေဲ့မယျဆို သူတို့ကို ပွနျအလေးထားပေးလိုကျပါ။
သငျ့ကိုတဈယောကျတညျးဖွဈနစေတေဲ့အကွောငျးအရငျးထဲမှာ ဒီအခကျြကလညျး အဓိက ပါဝငျနပေါတယျ။ သငျ့ကိုအသဈသဈသောအရာတှမေမွငျနိုငျအောငျ တားဆီးထားပါလိမျ့မယျ။ စိတျဓါတျကခြွငျးခြောကျထဲကို သငျ့ကိုဆှဲခနြတောပါ။
တခြို့လူတှကေတြော့ သငျ့ဆီကထှကျသှားလိုကျ သငျဒဏျရာတှအေနဲထိုငျခြိနျပွနျပေးလိုကျနဲ့ ကစားတတျကွပါတယျ။ ဒါကသငျ့ကို ကောငျးမှနျတဲအခဈြသဈတဈခုကို ဘယျတော့မှမတှအေ့ောငျလုပျထားပါလိမျ့မယျ။ သငျ့ကိုအထပျထပျအခါခါ ခံစားနရေစပေါလိမျ့မယျ။
ကိုယျရော သူရော လှတျမွောကျဖို့အတှကျ သငျ့ကိုမလိုခငျြသူကို လှတျခလြိုကျပါ။ စိတျကူးယဉျအခဈြဇာတျလမျးကိုမီးရှိ့ပဈလိုကျပါ။ အမှတျတရတှကေိုဖကျြဆီးပဈပါ။ ဓါတျပုံတှေ၊ စာတိုတှေ၊ ဗီဒီယိုတှစေတဲ့အမှတျတရအားလုံးပေါ့။
သူ့ကို လုံးဝအဆကျအသှယျဖွတျတောကျပါ။ လုံးဝအတှမေ့ခံပါနဲ့။ စိတျပါဝငျစားတဲ့ ပနျးခြီသငျတနျးဖွဈဖွဈ၊ ဂဈတာသငျ တနျးဖွဈဖွဈ၊ အခကျြအပွုတျသငျတနျးဖွဈဖွဈ တဈခုခုကိုလလေ့ာပါ၊တကျရောကျပါ။ အားကစားတဈခုခုလုပျပါ။ နံနကျ ခငျးမှာ ၅မိနဈလောကျတရားထိုငျပါ။
ငါဟာအကောငျးဆုံးအရာတှနေဲ့ထိုကျတနျတယျလို့ ပွောပါ။ ဘ၀ကို လနျးဆနျးအောငျပွနျနပေါ။ အသဲကှဲဖူးတာ သငျတဈယောကျတညျးမဟုတျတာကို ဆငျခွငျပါ။
အခဈြသဈတှေ လူကောငျးတှေ အနာဂါတျလှလှလေးတှရှေိနတေယျဆိုတာယုံပါ။ လှပတဲ့အခဈြတဈခုကိုရှာဖို့ဆုံးဖွတျခကျြခလြိုကျပါ။ သငျ့အိမျမကျတှလှေပလာပါလိမျ့မယျ။ ကဲ ဒီလောကျဆို သငျတဈယောကျတညျးဘ၀က ဘယျလိုရုနျးထှကျနိုငျမလဲသိလောကျပီထငျပါတယျ….
FA ဘ၀က ရုန်းထွက်နိုင်မယ့် ရိုးရှင်းတဲ့နည်းလမ်း ၄ ခု (ချစ်သူမရတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကဘာလဲ)
ဒီဆောင်းပါးက အကြံပေးချက်တွေက ကြာရှည်ပီးခိုင်ခန့်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုလိုချင်တဲ့လူတွေအတွက် မျှဝပေးတာပါ။ အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တစ်ယောက်တည်းနေခြင်းက အကျိုးကျေးဇူးတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နာကျင်မှုနဲ့အထီးကျန်မှုတွေကို ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လူအများစုက တစ်သက်လုံး တစ်ယောက်တည်း နေဖို့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်မချရဲကြပါဘူး။ အများစုက အချစ်နဲ့ဘ၀လက်တွဲဖော်ကိုလိုချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအရာတွေကို ရအောင်ကြိုးစားတဲ့နေရာမှာ မှားယွင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေို အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးတူညီတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့ဘ၀ကိုရှင်သန်နေကြပေမယ့် ရလာဒ်တွေကတော့ တူညီကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကိုရဖို့ ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်ကြမလဲ? Singleဖြစ်ခြင်းက ကျိန်စာတစ်ခုမဟုတ်သလို RSတစ်ခုရှိခြင်းကလည်းကျိန်စာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ဘယ်ဘ၀အခြေအနေတစ်ခုရောက်နေပါစေ အဲ့ဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာက သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ အလေ့အထတွေနဲ့ရွေးချယ်မှုတွေပါပဲ။ ဒီအရာတွေကမှ သင့်ကိုနာကျင်စေမယ့်လူတွေကိုဝေးဝေးရှောင်ဖို့နဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့ဘ၀ဖြစ်ဖို့ကူညီပေးနိုင်မှာပါ။ ဒီခေတ်မှာဆို အွန်လိုင်းပေါ်မှာချစ်သူရှာလို့ရတဲ့၊ ချိန်းတွေ့လို့ရတဲ့Dating siteတွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒီအံသြစရာကောင်းတဲ့နည်းပညာတွေကနေတစ်ဆင့် ကောင်းမွန်တဲ့ ချစ်သူတစ်ယောက်ကို သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ မင်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အရာတွေ၊ တားဆီးထားတဲ့အရာတွေကို ဖော်ထုတ်လို့လည်းရပါတယ်။ မင်းခုရည်းစားဘာလို့မရသလဲ စတဲ့ပြဿနာကို သင်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မင်းမဖြစ်ချင်တဲ့Singleဘ၀ကို ဘာကြောင့်ရနေလဲဆိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းတွေဖော်ထုတ်ကြည့်ဖို့လိုနေပါပြီ။ မင်းကိုယ်တိုင်မသိပဲအချစ်ကိုအ၀ေးပြေးအောင်လုပ်နေမိတဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲ? ဒီတော့ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှာဖွေရာမှာ အမျိုးသမီးတွေမှားယွင်းနေတဲ့အချက်လေးတွေကို ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပေးချင်ပါတယ်။ ၀င်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့လည်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်..
ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို ပြေးစေချင်ရင် သူ့ကိုအရမ်းလိုအပ်နေတာကိုပြလိုက်ပါတဲ့။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုလိုချင်တာက တခြားအရာတွေကိုလိုချင်တာနဲ့မတူပါဘူး။
လိုအပ်ချက်ဆိုတာ သင့်ကိုသင်မပြည့်စုံဖူးလို့ခံစားနေရတဲ့စိတ်ခံစားမှု ဒါမှမဟုတ် လုံးဝလစ်ဟာနေသလိုဘ၀လို့ခံစားမှု စတဲ့ စိတ်ခံစားမှုအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ ဒီလိုနှလုံးသားထဲက ကွက်လပ်ကို RSတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် Officialချပြလို့ရတဲ့လူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဖြည့်စွက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ မိန်းမအတော်များများက လိုချင်တဲ့ ကတိက၀တ်မျိုးတွေ၊ စံနှုန်းတွေသတ်မှတ်လေ့ရှိပီး ဒါတွေကို ယောက်ျားတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် မကြိုက်တဲ့အခါ မိန်းမတွေက အတော်စိတ်ရှုပ်ထွေးရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယောက်ျားတွေကတော့ ကတိက၀တ်တွေ မလိုအပ်ကြပါဘူး။ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ဖြစ်တည်မှုကိုအတိအကျမြင်ပြီး တန်ဖိုးထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ထဲကို ပျော်ရွှင်စွာ ၀င်လာပါလိမ့်မယ်။အပြန်အလှန်အားဖြင့် ယော်က်ျားတစ်ယောက်ကို ကိုယ့်ကောင်းစားမှုအတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုလို ရှုမြင်တဲ့ သို့မဟုတ် သူ့လစ်ဟာနေမှု၊သူ့လိုအပ်ချက်အချို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့လူအဖြစ်လိုချင်တဲ့ မိန်းမမျိုးဆိုရင်တော့ ယော်ကျားတွေက ၀ေးဝေးကိုပြေးကြပါလိမ့်မယ်။ ဆိုတော့ ယောကျာ်းတွေမပြေးစေချင်ရင် သူတို့ကိုအသုံးချဖို့မကြိုးစားပါနဲ့။
နောက်တစ်ခုက ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ကိုထောက်ပံပေးနိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ချင်ကြတယ်။ သူ့ထက်သာတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဆီကိုလွယ်လွယ်နဲ့အချိန်မရွေးရောက်သွားနိုင်မယ့် အဖြည့်စွက်ခံ အမှုတ်အမွှားလေးတစ်ခုလို သူတို့ကမခံစားစေချင်ကြဘူး။
လိုအပ်ချက် ဆိုတာက များသောအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တန်ဖိုးထားမှုကင်းမဲ့ခြင်း နဲ့ယုံကြည်မှုကင်းမဲ့ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ သင့်ကိုတိုင် သို့မဟုတ် သင့်ဘ၀အသက်တာမှာ တစ်စုံတစ်ခုပျောက်ဆုံးသွားသလို ခံစားနေရရင် ဆက်ဆံရေးတစ်ခုခုက ကုသမှုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ မှားယွင်းစွာယုံကြည်မိတတ်ကြတယ်။ သင်RSတစ်ခုမတည်ဆောင်ခင် မပျော်ရွှင်ခဲ့ဘူးဆိုရင် သင်ရသွားလည်း မပျော်ရွှင်ပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကိုသင်Singleတစ်ယောက်ဖြစ်နေတာ ၀မ်းနည်းနေမယ့်အစား အလုပ်တစ်ခုခုလုပ်ပီးမင်းကိုယ်တိုင်နဲ့မင်းကိုယ်မင်းပဲဆက်ဆံရေးတစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်ပါ။ မင်းအတွက်ဘာတွေက အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာနဲ့ မင်းခံစားမှုအတွက် အကောင်းဆုံးဖြစ်လာမယ့်အရာတွေကို လုပ်ပါ။ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာအောင်နဲ့လှအောင်နေပါ။ အိုကေ..မင်းကိုယ်မင်းတတ်နိုင်သလောက်အကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ပီးပီ၊ ကြံခိုင်ပျော်ရွှင်လာပီလို့ခံစားလာရရင် ဘယ်ယောက်ျားမှမင်းဆီကပြေးမထွက်သွားတော့ပါဘူး။
များသောအားဖြင့် အမျိုးသမီးအများစုက သူတို့အပူတပြင်းနဲ့လိုချင်တဲ့အရာကိုရဖို့အတွက် စောင့်ဆိုင်းသည်းခံဖို့တော့ဆန္ဒရှိကြပါတယ်။ အဲ့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ သူတို့စိတ်ကူးယဉ်အိမ်မက်မက်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ထက်လျော့နည်းတဲ့ယောက်ျားတွေကိုမကြိုက်နှစ်သက်သလို အရမ်းဇီဇာကြောင်ဂျေးများနေတတ်ကြပါတယ်။ အချစ်ဟာအရာအားလုံးကိုအောင်နိုင်တယ်လို့ ပြောတတ်ကြပေမယ့် အချစ်တစ်ခုတည်းကသာ ကြံခိုင်ကောင်းမွန်တဲ့RSတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာမဟုတ်ပါဘူး။ အခြားအကြောင်းအချက်အလက်တွေရှိပါသေးတယ်။ ကွဲကွာသွားတဲ့ချစ်သူတွေတချို့ကိစ္စတွေကြောင့် တချိန်ချိန်မှာပြန်ချစ်လာနိုင်ကြပါတယ်။ မင်းရဲ့ပထမဆုံးချိန်းတွေ့မှုမှာ ပြင်းထန်ညို့ငင်တဲ့ခံစားမှုကို မခံစားရရင် ထိုသူကမင်းဘ၀အတွက် အလင်းရောင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါလိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုက “အချစ်နဲ့အတည်တကျနေဖို့ထက်တစ်ယောက်တည်းနေတာပဲကောင်းတယ်”ဆိုတဲ့အတွေးကိုလက်ကိုင်ထားတတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ချမှတ်ထားတဲ့ ကြီးကျယ်တဲ့ စည်းမျည်းစည်းကမ်းတွေထဲမှာ ပိတ်မိနေကြပြီး သူတို့ရဲ့အိမ်မက်ထဲကကောင်လေးကိုပဲ စောင့်နေတတ်ကြပါတယ်။ Singleအဖြစ်တစ်ယောက်တည်းနေလေလေ “ကောင်းပီ ငါဒီတစ်ခုကိုရှာဖို့ ဒီလောက်ကြာခဲ့ပြီ၊ဘာကိုမှ အလျော့ပေးလိုက်လျောခြင်းမရှိပဲငါလိုချင်တာကိုအတိအကျရဖို့ ငါထိုက်တန်တယ်”ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ ပိုဆိုးလေလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
လူတစ်ယောက်မှာသင်လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းမရှိတဲ့ အရည်အသွေး၃ခုကိုစာရင်းပြုစုပါ။ ဒီထဲမှာ သူပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာနဲ့ဆံပင်ဘယ်လောက်ပေါက်လဲဆိုတာ မပါပါစေနဲ့။ ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုက်ဆံနဲ့ဆံပင်ပုံစံတွေကမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့ဆိုရင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုအရမ်းအလေးမထားပါနဲ့။ သင့်စိတ်နဲ့လုံးလုံးဆန့််ကျင်တဲ့ချို့ယွင်းချက်မရှိမချင်းသူ့ကိုနောက်ထပ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါ။ မိန်းမတော်တော်များများက သင့်တော်တဲ့အခွင့်အရေးမပေးပဲ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုစိတ်ထဲက အမြန်ထုတ်ပစ်ဖို့ပဲလုပ်နေတတ်ကြတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့စံနှုန်းတွေက ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင်အမူအကျင့်တွေနဲ့တောင်မကိုက်ညီတတ်ပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်၊ ဒီတော့ သင်လိုချင်တဲ့ အဓိက အရည်အချင်းတွေမရှိရင်တောင် သင်နေ့စဉ်ဘ၀ဖြတ်သန်းမှုနဲ့ကိုက်ညီသင့်တော်မယ့် အချက်တွေကိုချရေးပါ။ မင်းရဲ့စိတ်ကိုနည်းနည်းလေးဖွင့်လိုက်တဲအခါ အရမ်းအံသြသာယာဖွယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကြုံတွေ့လာရနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ပြောချင်တာက အရမ်းဇီဇာမကြောင်ဖို့ပါပဲ။
သင်ရည်းစားမရအောင်အကြီးမားဆုံးတားဆီးနေတဲ့အချက်က သင့်ကိုမလိုချင်တဲ့ယောက်ျားတွေကို သင်ကအရမ်းလိုချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုကမ်းလာတဲ့လက်တွေ၊ နှလုံးသားတွေကို မမြင်နိုင်ပဲ ကိုယ့်နှလုံးသားလိုချင်တာကိုပဲ ရူးသွပ်နေကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများရှိပါတယ်။ သင့်အတွက်ဘာမဆိုပေးဆပ်ရဲတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သင့်ရဲ့အတ္တကြောင့် အကြီးအကျယ်ပျက်စီးသွားစေနိုင်သလို သင့်အတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကိုလည်းဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။
မင်းကိုမလိုချင်တဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအတင်းလိုက်မတွယ်ကပ်နေပါနဲ့။ ဒါသင့်ကိုအခြားသော ကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေကို မမြင်နိုင်အောင်ကာဆီးထားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုချစ်ခင် မြတ်နိုးသူ၊ ဂရုစိုက်သူ၊ နားလည်နိုင်စွမ်းရှိသူတွေ သင့်ဘေးမှာ ရှိနေခဲ့မယ်ဆို သူတို့ကို ပြန်အလေးထားပေးလိုက်ပါ။
သင့်ကိုတစ်ယောက်တည်းဖြစ်နေစေတဲ့အကြောင်းအရင်းထဲမှာ ဒီအချက်ကလည်း အဓိက ပါဝင်နေပါတယ်။ သင့်ကိုအသစ်သစ်သောအရာတွေမမြင်နိုင်အောင် တားဆီးထားပါလိမ့်ယ်။ စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းချောက်ထဲကို သင့်ကိုဆွဲချနေတာပါ။ တချို့လူတွေကျတော့ သင့်ဆီကထွက်သွားလိုက် သင်ဒဏ်ရာတွေအနဲထိုင်ချိန်ပြန်ပေးလိုက်နဲ့ ကစားတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကသင့်ကို ကောင်းမွန်တဲအချစ်သစ်တစ်ခုကို ဘယ်တော့မှမတွေ့အောင်လုပ်ထားပါလိမ့်မယ်။ သင့်ကိုအထပ်ထပ်အခါခါ ခံစားနေရစေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ်ရော သူရော လွတ်မြောက်ဖို့အတွက် သင့်ကိုမလိုချင်သူကို လွှတ်ချလိုက်ပါ။ စိတ်ကူးယဉ်အချစ်ဇာတ်လမ်းကိုမီးရှိ့ပစ်လိုက်ပါ။ အမှတ်တရတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်ပါ။
ဓါတ်ပုံတွေ၊ စာတိုတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေစတဲ့အမှတ်တရအားလုံးပေါ့။ သူ့ကို လုံးဝအဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ပါ။ လုံးဝအတွေ့မခံပါနဲ့။ စိတ်ပါဝင်စားတဲ့ ပန်းချီသင်တန်းဖြစ်ဖြစ်၊ ဂစ်တာသင်တန်းဖြစ်ဖြစ်၊ အချက်အပြုတ်သင်တန်းဖြစ်ဖြစ် တစ်ခုခုကိုလေ့လာပါ၊တက်ရောက်ပါ။ အားကစားတစ်ခုခုလုပ်ပါ။ နံနက်ခင်းမှာ ၅မိနစ်လောက်တရားထိုင်ပါ။
ငါဟာအကောင်းဆုံးအရာတွေနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ ပြောပါ။ ဘ၀ကို လန်းဆန်းအောင်ပြန်နေပါ။ အသဲကွဲဖူးတာ သင်တစ်ယောက်တည်းမဟုတ်တာကို ဆင်ခြင်ပါ။ အချစ်သစ်တွေ လူကောင်းတွေ အနာဂါတ်လှလှလေးတွေရှိနေတယ်ဆိုတာယုံပါ။ လှပတဲ့အချစ်တစ်ခုကိုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။ သင့်အိမ်မက်တွေလှပလာပါလိမ့်မယ်။ ကဲ ဒီလောက်ဆို သင်တစ်ယောက်တည်းဘ၀က ဘယ်လိုရုန်းထွက်နိုင်မလဲသိလော်ပီထင်ပါတယ်….
Previous articleနဖေငျထိုးတဲ့အထိအိပျမယျ့အစား မနကျစောစောထခွငျးရဲ့ ‌ကောငျးကြိုးမြား
Next articleကြှနျမတို့ မိခငျတှေ အဘှားဖွဈလာပွီးနောကျပိုငျးမှာ ပွောငျးလဲသှားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုမြားအကွောငျး